Android ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် ရှိကိုရှိသင့်တဲ့အချက်တွေက?? – DigitalTimes
Android ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် ရှိကိုရှိသင့်တဲ့အချက်တွေက??
Android Knowledge Mobiles & Tablets
တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖုန်းဝယ်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဝယ်မယ့် စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ရှိကိုရှိရမယ့် feature တွေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ feature လေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားပါမယ်
ပထမအနေနဲ့ ဖုန်းအသစ်ဝယ်မယ်ဆို ရှိရမယ့် ဦးစားပေးအရာတွေကို ပြောပါမယ်။
စွမ်းရည်မြင့် processor ပါ။ အနည်းဆုံး ၂နှစ်လောက်ခံအောင် သုံးချင်ရင်တော့ စွမ်းရည်အတော်အသင့်မြင့်တဲ့ processor တွေကိုသုံးရပါမယ်။ ဥပမာဆိုရင် Qualcomm ရဲ့ flagship စီးရီးထဲက processor တွေထဲကရွေးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းဆိုတာပုံမှန်သုံးနေရင်းနဲ့ကို နှေးလာတတ်တဲ့အမျိုးမို့ processor သာ မကောင်းရင် ကြာကြာအသုံးမခံပါဘူး။ flagship ပရိုဆက်ဆာတွေကတော့ဘက်ထရီကိုလည်း ချွေတာပေးတဲ့အပြင် အနိမ့်တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် performance ကလည်း ပိုကောင်းပါတယ်။
အနည်းဆုံး RAM 4GB, storage 64GB ရှိရပါမယ်။ RAM 4GB ဆိုတာကတော့ မိုဘိုင်းလောကမှာ တောတော်များများသုံးလာကြတဲ့စံပမာဏပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကောင်းမွန်ဖို့ဆို RAM အသင့်အတင့်ရှိမှဖြစ်မှာပါ။ ဒီထက်နည်းရင်တော့ ကြာကြာသုံးလေ ပြဿနာတက်လေ စိတ်ညစ်လေဖြစ်မှာပါ။
ဖုန်းကိုကြာကြာသုံးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ storage 64 GB ရှိသင့်ပါတယ်။ SD ကဒ်သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ internal 32 GB လောက်နဲ့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက fingerprint sensor ပါ။ ခုခေတ်ဆို ဖုန်းရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်တွေကလည်း အဆင့်မြင့်သထက်မြင့်လာပြီမို့ ဖုန်းကိုလော့ခ်ဖွင့်တဲ့အခါ မြန်ဖို့လွယ်ကူဖို့က fingerprint sensor က တော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပါတယ်။ LastPass တို့လိုမျိုး app တွေကိုသုံးချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပိုကောင်းပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ရှိသင့်တဲ့ feature တွေပါ။ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ပေမယ့် ရှိထားရင် တော်တော်မိုက်မှာပါ။
QHD display ရှိဖို့လိုပါတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ FHD လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ၂ခုလုံးကတော့ ဘက်ထရီခံပြီး ကြည့်ရအဆင်ပြေပါတယ်။ သာမန်မျက်စိလောက်နဲ့ကတော့ သူတို့ဘယ်လောက်ကွဲပြားတယ်ဆိုတာ မြင်သာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက NFC ပါ။ ခုချိန်မှာတော့ ကိစ္စမရှိသေးပေမယ့် နောက်ပိုင်း wireless payment တွေလာတဲ့အခါ ဒါမရှိရင် အဆင်ပြေပါ့မလားတောင် စိတ်ပူစရာပါ။
နောက်တစ်ခုက USB C ပေါက်၊ 3000 mAh နဲ့အထက်ဘက်ထရီ၊ နားကြပ်ပေါက်၊ သာမန်ပွန်းရှတာလောက်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ Gorilla Glass ၊ ကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့ IP67 ဒါမှမဟုတ် IP68 စတာတွေရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေမပါရင် ကိုယ့်ဖုန်းကိုမကြိုက်ရတော့ဘူးလားမဟုတ်ပေမယ့် ပါရင်ပိုတောင်ကောင်းလွန်းတဲ့ အသုံးတည့်တဲ့ feature လေးတွေပါ။
နောက်ထပ်လည်း ဖန်ကိုယ်ထည်တွေ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်တွေစတဲ့ အမိုက်စား feature တွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ခုချိန်ထိ ထူးထူးခြားခြားကြီးကောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်သေးတော့ “should-have” စာရင်းထဲတောင် မထည့်သေးပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင် chip တွေထုတ်လုပ်ဖို့ Apple အရင်အင်ဂျင်နီယာကို ခန့်လိုက်တဲ့ Google
၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ Selfie Camera အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းများ